လူမှုမီဒီယာ Image Dimension လမ်းညွှန် 2020 | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 16, 2019 တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 16, 2019 Douglas Karr
အပတ်တိုင်းလူမှုကွန်ယက်တစ်ခုသည်အပြင်အဆင်များပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ၄ င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဓာတ်ပုံများ၊ နောက်ခံပတ္တူနှင့်ကွန်ယက်ပေါ်တွင်မျှဝေထားသောပုံများအတွက်ရှုထောင့်အသစ်များလိုအပ်နေသည်။ လူမှုရေးပုံရိပ်များအတွက်ကန့်သတ်ချက်များသည်အတိုင်းအတာ၊ ပုံအရွယ်အစားနှင့်ပုံအတွင်း၌ဖော်ပြသောစာသားပမာဏပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။
ဆိုရှယ်မီဒီယာစာမျက်နှာများသို့ပုံကြီးချဲ့ခြင်းများကိုသတိမပြုပါနှင့်။ သင်၏ပုံများသည်မှုန်ဝါးစေပြီးရန်လိုသောပုံရိပ်ကိုချုံ့သည်။ သင်တစ် ဦး အကြီးအပုံရိပ်တင်နိုင်လျှင် ပုံကိုချုံ့ပါ ၎င်းကိုမတင်ပို့မီဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြင့်သင်သည်ပိုမိုသောကြည်လင်သောရလဒ်များကိုရရှိလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်ဤအချက်အလက်အချက်အလက်ကိုလွယ်ကူစွာ ထား၍ ပြောင်းလဲမှုများအတွက်မကြာခဏပြင်ဆင်ပါ။
Facebook ပုံ၊ ဗီဒီယိုနှင့်ကြော်ငြာပုံအရွယ်အစား
Facebook မီဒီယာ Pixels အရွယ်အစား (အကျယ် x အမြင့်)
ပရိုဖိုင်းပုံရိပ် X ကို 180 180
အဖုံးဓာတ်ပုံ X ကို 820 312
ပုံများမျှဝေပါ X ကို 1200 630
မျှဝေလင့်ခ် Preview X ကို 1200 628
ပုံကိုမီးမောင်းထိုးပြ X ကို 1200 717
အဖြစ်အပျက်ပုံ X ကို 1920 1080
စီးပွားရေးစာမျက်နှာကိုယ်ရေးအကျဉ်း X ကို 180 180
မီဒီယာ Pixels အရွယ်အစား (အကျယ် x အမြင့်)
ပရိုဖိုင်းပုံရိပ် 400 x 400 (အနိမ့်ဆုံး 200 x 200 မှ 20,000 အထိ 20,000 အထိ)
ကိုယ်ပိုင်နောက်ခံပုံ X ကို 1584 396
ကုမ္ပဏီစာမျက်နှာလိုဂို X ကို 300 300
ကုမ္ပဏီစာမျက်နှာနောက်ခံပုံ X ကို 1536 768
ကုမ္ပဏီစာမျက်နှာသူရဲကောင်းပုံရိပ် X ကို 1128 376
ကုမ္ပဏီစာမျက်နှာအလံ X ကို 646 220
Youtube မီဒီယာ Pixels ၏အရွယ်အစား (အမြင့် x ကို Pixels အတွက်အရွယ်အစား (အနံ x အမြင့်) အကျယ်)
ရုပ်ပုံပရိုဖိုင်းပုံရိပ် X ကို 800 800
Channel Cover ဓာတ်ပုံ X ကို 2560 1440
ဗီဒီယိုတင်ခြင်း X ကို 1280 720
Instagram မီဒီယာ Pixels အရွယ်အစား (အကျယ် x အမြင့်)
ပရိုဖိုင်းပုံရိပ် X ကို 110 110
ဓာတ်ပုံ Thumbnail ပုံများ X ကို 161 161
ဓာတ်ပုံအရွယ်အစား X ကို 1080 1080
Instagram ကိုဇာတ်လမ်းများ X ကို 1080 1920
Twitter မီဒီယာ Pixels အရွယ်အစား (အကျယ် x အမြင့်)
ပရိုဖိုင်းကိုဓာတ်ပုံ X ကို 400 400
ခေါင်းစီးဓာတ်ပုံ X ကို 1500 500
In-Stream ဓာတ်ပုံ X ကို 440 220
မီဒီယာ Pinterest Pixels အရွယ်အစား (အကျယ် x အမြင့်)
ပရိုဖိုင်းပုံရိပ် X ကို 165 165
ဘုတ်ပြသခြင်း X ကို 222 150
Thumbnail ဘုတ်အဖွဲ့ X ကို 50 50
Pin Image အရွယ်အစား ၂၃၆ x [Variable Height]
Tumblr မီဒီယာ Pixels အရွယ်အစား (အကျယ် x အမြင့်)
ပရိုဖိုင်းပုံရိပ် X ကို 128 128
ပုံတင်ရန် X ကို 500 750
Ello မီဒီယာ Pixels အရွယ်အစား (အကျယ် x အမြင့်)
ပရိုဖိုင်းပုံရိပ် X ကို 360 360
နဖူးစည်းစာတန်းပုံ X ကို 2560 1440
Weibo မီဒီယာ Pixels အရွယ်အစား (အကျယ် x အမြင့်)
ပရိုဖိုင်းကိုဓာတ်ပုံ X ကို 200 200
ဆောင်းပါး Preview ခေါင်းစီး 900 x 500 (ပြသမှု 360 x 200) ။
ဆောင်းပါး Preview Thumbnail 400 x 400 (ပြသမှု 200 x 200) ။
ဆောင်းပါး Inline ပုံရိပ် ၂၃၆ x [Variable Height]
အဖုံးပုံရိပ် X ကို 920 300
ပရိုဖိုင်းရုပ်ပုံများ 200 x 200 (ပြသမှု 100 x 100) ။
banner X ကို 2560 1440
နင် X ကို 120 120
ပြိုင်ပွဲ Preview X ကို 640 640
Snapchat Pixels အရွယ်အစား (အကျယ် x အမြင့်)
Geofilter X ကို 1080 1920
2020 လူမှုမီဒီယာပုံအရွယ်အစားလမ်းညွှန် လူမှုကွန်ယက်တစ်ခုစီနှင့်မည်သည့်ပုံအမျိုးအစားများအတွက်မည်သည့်အကောင်းဆုံးပုံအရွယ်အစားကိုသင့်အားရှင်းပြသည်။ အဓိကဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတိုင်းကိုဒီနေရာမှာစာရင်းပြုစုထားတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်။
ဂျေမီ, တစ် ဦး ကဝဘ်ဆိုက် Hub လုပ်ပါ
အခုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်၊ ငါတို့မှာအရွယ်အစားအထူးသဖြင့် profiles တွေအတွက်စံချိန်စံညွှန်းတွေရှိတယ်။ ငါပလက်ဖောင်းများမကြာမီအတူတူအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုအဆိုးမြင်ငါ ... ဒါကြောင့်သင်နှင့်ငါအဘို့ပိုပြီးအလုပ်ဆိုလိုသည်။
Make Website Hub တစ်ခုကိုလည်းယခုနှစ်တွင်၎င်းနှင့်အတူပုံနှိပ်ထားသည့် PDF ဖိုင်တစ်ခုပါ ၀ င်သည် လူမှုမီဒီယာပုံရိပ်နှင့်ဗီဒီယိုအရွယ်အစား 2020 Infographic:
Print-Ready PDF ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ
Tags: 2020facebook ခေါင်းစဉ်ပုံရိပ်အတိုင်းအတာfacebook ပုံရိပ်တွေGoDaddygoogle + header image ပုံရိပ်တွေဂူးဂဲလ် + ပုံရိပ်အတိုင်းအတာIllustrator templateinfographicinstagram ပုံရိပ်အတိုင်းအတာLinkedin ပုံရိပ်အတိုင်းအတာဝက်ဘ်ဆိုက်အချက်အချာလုပ်ပါPhotoshop template ကိုpinterest ပုံရိပ်အတိုင်းအတာရေတိုလူမှုမီဒီယာပုံရိပ်အတိုင်းအတာလူမှုမီဒီယာပုံရိပ်အရွယ်အစားtwitter ပုံရိပ်အတိုင်းအတာyoutube ပုံရိပ်အတိုင်းအတာ
17:2013 pm မှာဇွန် 11, 49
ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုလွယ်ကူစွာလုပ်နိုင်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤအတိုင်းအတာသည် infographics ဖန်တီးရန်ကူညီသည်။
5:2013 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 6, 41 တွင်
ပတေရုသ Bredahl ဆည်
စက်တင်ဘာ 24, 2015 မှာ 3: 14 AM
ဒီလမ်းညွှန်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်ဂလပ် ဤလမ်းညွှန်သည်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းတစ် ဦး အား Photoshop တွင်အရွယ်အစားပြောင်းလဲမှုအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာအတိုင်းအတာအတွက်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကိုချမှတ်ခြင်းမှအချိန်နှင့်နာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံစားရန်အတွက် Photoshop CC extension ကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အားမှုတ်သွင်းခဲ့သည်။ extension ကိုသင်ဒီမှာရှာနိုင်သည်။ http://dam-photo.com/easy-web-resize-export-photoshop-cc-extension/
အတိုချုပ်အားဖြင့် extension panel သည် active layer ကိုယူသွားလိမ့်မည်။ ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်သင်၏ဆောင်းပါး၌ဖော်ပြသောအတိုင်းအတာအတွင်းအဖုံးများသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာဓာတ်ပုံများကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ ဓာတ်ပုံများကိုလူမှုကွန်ယက်များပေါ်တွင်မျှဝေရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်ဖိုင်တွဲထဲ၌ဖိုင်တွဲတစ်ခုတွင်ထားလိမ့်မည်။ တစ်နေရာတည်းတွင်မည်သည့်အလွှာကိုမဆိုအရွယ်အမျိုးမျိုးကိုအရွယ်အစားပြောင်းရန်ခွင့်ပြုသည့်စိတ်ကြိုက်နယ်ပယ် ၅ ခုလည်းရှိသည်။
ကုန်ပစ္စည်းမှာ 40% လျှော့စျေးရရန်သင်၏စာဖတ်သူများသည်“ MarketingTechBlog40” ကုဒ်ကို သုံး၍ လှုံ့ဆော်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
24:2015 pm တွင်စက်တင်ဘာ 3, 47 မှာ
28:2015 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 12, 41 တွင်
ဒါကအသုံးဝင်တယ်။ FYI၊ သင်ဟာ“ Cover” နှင့်“ Profile” အတွက်ခေါင်းစီးကိုပြောင်းလိုက်ပြီ။
11:2016 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 12, 37
တကယ်တော့အလွန်သိကောင်းစရာကောင်းတဲ့အချက်ပဲ၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒေါက်ဂလပ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာပုံရိပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးကူညီပေးမယ့်ရိုးရှင်းတဲ့လမ်းညွှန်တစ်ခုကိုမင်းနဲ့မျှဝေလိုက်ပြီ။
14:2016 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 6, 14
Cover Size နှင့် Profile Size ခေါင်းစဉ်ကိုဇယားတွင်ပြောင်းပြန်ထားကြောင်းမည်သူမျှသတိပြုမိသည်ကိုကျွန်ုပ်မယုံနိုင်ပါ။
15:2016 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 2, 14
အမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးခြင်းခံရသော်လည်းမည်သည့်အခါကမှမွမ်းမံရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ။ သတိပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ရှေးရှေးအများစုကပဲဂရပ်ဖစ်ကိုခုန်တက်လိုက်ကြတယ်။
24:2016 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 5, 20
ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဤအကူအညီသည်မလွယ်ကူပါ၊ လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအရွယ်အစားသည်ဤတွင်ရှိသည့်အရာနှင့်မကိုက်ညီပါ။ အကြံပြုထားသည့်အရွယ်အစားနှင့်ပို့စ်တင်ခြင်းသည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်ကြည့်ရှုသောအခါအစိတ်အပိုင်းများကိုမကြာခဏဖြတ်တောက်သည်။
24:2016 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 12, 38 တွင်
ဒံယလေ, ထို input ကိုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! သင် Shortstack ရဲ့ထွက်စစ်ဆေးချင်ပေမည် Ultimate လူမှုမီဒီယာပုံအရွယ်အစားလမ်းညွှန်!
10:2017 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 7, 35
ဟေ့ဒေါက်ဂလပ်စ်၊ ဤစီမံကိန်းသို့သင် ၀ င်ရောက်ခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဤလမ်းညွှန်ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်သလား။
10:2017 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 9, 45
Make A Website Hub တွင်ရှိသောလူအများကချီးကျူးထိုက်သည်။ ငါသည်သူတို့၏ 2017 ထုတ်ဝေနှင့်အတူက updated!
ဇန်နဝါရီ 23, 2017 မှာ 9: 57 AM
ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောအလွန်ကြီးစွာသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ် !! ငါနေ့စဉ်နီးပါးအသုံးပြုသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် @Douglas Karr!
ဇန်နဝါရီ 23, 2017 မှာ 11: 47 AM
သင်လောင်း! PS: ငါလည်းလုပ်တယ်။
23:2017 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 6, 19
twitter အတွက် Gif အရွယ်အစားသည်ဝက်ဘ်ပေါ်တွင် ၁၅ mb ဖြစ်သည်
ဂျင်မ် Garcia က
8:2017 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 43 တွင်
ဝိုး။ ပစ္စည်းကောင်း အဲဒါကိုမွမ်းမံထားသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မတ်လ 23, 2017 မှာ 10: 31 AM
ငါဇယားတွေနဲ့သဘောမတူဘူး၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာဓာတ်ပုံ ၁၃၉၇ × ၂၀၄၈ ဒါမှမဟုတ် ၂၀၄၈ ၁၄၆၆ ကိုထုတ်ဝေနိုင်တယ်။
မတ်လ 23, 2017 မှာ 2: 33 pm တွင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဇယားကို update လုပ်မယ့်။
ပေါလ် fg Abrahams
မေလ 26, 2017 မှာ 2: 29 AM
Godaddy ၏ downlink သည်အလုပ်မလုပ်ပါ၊ GoDaddy ကိုအကြောင်းကြားရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းမရှိပါ။
မေလ 26, 2017 မှာ 9: 30 pm တွင်
ဟိုင်းပေါလ်။ ကျွန်တော်သူတို့ကိုကိုင်ပြီးပုံစံကိုစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အီးမေးလ်ကိုသင့်ရဲ့ spam ကိုဖိုင်တွဲသို့ပို့ခဲ့သည်?